एप्पलका नयाँ आइफोन कस्ता हुने छन् ? हेर्नुस् – Everest Dainik – News from Nepal
एप्पलका नयाँ आइफोन कस्ता हुने छन् ? हेर्नुस्
काठमाडौं, साउन १५ । एप्पलको नयाँ मोडल कस्तो आउँछ भन्ने धेरैलाई चाँसो हुन सक्छ । तपाइमा त्यो चाँसो छ भने करीब पूरा भएको छ । फोनको जानकारी चुहावट गर्दै आएका बेन गेस्किनले नयाँ आइफोनको डमी मोडल पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
यो डमी मोडलमा खासमा केही हुँदैन, यो मात्रै प्लाष्टिकको फोन हो । तर यसले एप्पलको आउँदो आइफोनका बारेमा केही कौतुहलता भने पक्कै कम गरेको छ । गेस्किले सन् २०१७ को मे मा ‘आइफोन एट’ भन्दै डमी मोडल सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसको नाम भने फरक भयो, एप्पलले आइफोन एक्स नाममा नयाँ फोन ल्यायो । तर मोडल भने गेस्किनले महिना दिनअघि सार्वजनिक गरेको डमी मोडलसँग धेरैहदसम्म मिलेको थियो । -एजेन्सी
ट्याग्स: New iphone